Kwifektri YamaPayipi, Abahlinzeki - China Kwabenzi Bamapayipi
Lashukumisa Pipe isiphanyeko Ibhande
Njengomunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu inkampani, lashukumisa ipayipi isiphanyeko imichilo yethu ithole okukhulu ukuthandwa emhlabeni wonke, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi zifakwe ithusi ngemigodi eshintshashintshayo engu-1/4 kanye no-3/16 ″ ngokuhlelekile.
UPC Plastic 180 ° Ukumiswa Ngocingo
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zokumiswa kwepulasitiki ezingama-180 ° zivunyiwe yi-UPC. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, izimbambo zazo zivumela ipayipi ukuba lishelele kalula futhi lithule lapho ipayipi likhula futhi lisebenza.
Lashukumisa Pipe isiphanyeko Ibhande Wave-Shaped
Njengomunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu inkampani, lashukumisa ipayipi isiphanyeko imichilo yethu wave emise bathole omkhulu ukuthandwa emhlabeni wonke, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi i-zinc ifakwe imigodi engu-3/16 struct ngokuhlelekile.
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izibopho zethu zepulasitiki zepulasitiki zivunyiwe yi-UPC. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, izimbambo zazo zivumela ipayipi ukuba lishelele kalula futhi lithule lapho ipayipi likhula futhi lisebenza.
Plastic Pipe isiphanyeko Ibhande
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu yenkampani, plastic ipayipi isiphanyeko imichilo yethu yakhelwe ngendlela esheshayo futhi engabizi hang ipayipi kusuka joists noma imishayo. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, zenziwe nge-polyethylene.
IMilford Hanger isetshenziselwe ukulengisa ipayipi lethusi kusuka entweni
Njengenye yeziphanyeko zokuncintisana kakhulu zenkampani, iziphanyeko zethu zaseMilford zisetshenziselwa ukulenga ipayipi lethusi entweni. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika.